Tatitry ny PNUD: toekarena reraky ny krizy politika sy ny andro ratsy | NewsMada
Tatitry ny PNUD: toekarena reraky ny krizy politika sy ny andro ratsy
Hatramin’ny taona 1990, tsy mety tafarina fa mihamahantra hatrany ny ankamaroan’ny Malagasy tombanana ho 25 tapitrisa, araka ny tatitra nataon’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana (Pnud). Tamin’ny 2016, 410 dolara isan-taona ny fidirambolan’ny olona iray, salanisa amin’ny ankapobeny ; tafidina 360 dolara izany ny taona 2018, amin’ity 2020 ity, mety ho latsaka 280 dolara, noho ny valanaretina Covid-19 sy ny antony maro hafa.
Mateti-pitranga loatra ny krizy politika mahatonga fahatapahan’ny famatsiam-bola avy any ivelany na mihena ; tsy matoky ireo mpampiasa vola ka tsy miova na mitotongana ny toekarena. Miantraika any amin’ny isam-batan’olona mivantana izany fahavoazan’ny toekarena izany ka na eo aza ireo harena maro eto amin’ny firenena tsy mahavita mitrandraka izany hisian’ny fampandrosoana maharitra ny fanjakana.
Mila fampiasam-bola matanjaka ny hanarenana ny toekarena, indrindra ny hanaovana ireo fotodrafitrasa, toy ny lalana, ny lalamby, ny famokarana angovo, mba hitovitovy amin’i Sénégal sy Côte d’Ivoire ny eto Madagasikara, raha ny hevitry ny Pnud. Tokony ho maharaka fifaninanana tsara i Madagasikara mba tsy ho ambany ny vidin’ireo vokatra fanondrana ; ny kolikoly ; ny tsy fandriampahalemana. Hatramin’ny taona maro ka hatramin’izao, ireo no sakana tsy mankany amin’ny fampandrosoana.
Vokatry ny andro ratsy
Olana iray lehibe, raha ny fanadihadian’ny Pnud ihany, Madagasikara, tsy afa-bela amin’ny andro ratsy. Faritra 16 amin’ireo 22 fandalovan’nny rivodoza, iharan’ny tondran-drano na haintany maharitra noho ny fiovaovan’ny toetr’andro. Olona antapitrisany no traboina isaky ny andro ratsy. Mampitombo ny fahantrana ireo, hita amin’ny faharavan’ny ala sy ny fifindra-monina.
Tsy tafarina hatramin’izao, ohatra, ny fahavoazana nateraky ny fandalovan’ny rivodoza Enawo, ny taona 2017. Tombanan’ny FMI ho 400 tapitrisa dolara ny fahavoazana vokatry ny haintany tamin’ny 2016 sy ny rivodoza tamin’ny 2017.